Juventus oo weli xiiseynaysa Mauro Icardi, inkastoo uu haatan ku sugan yahay Kooxda PSG – Gool FM
Juventus oo weli xiiseynaysa Mauro Icardi, inkastoo uu haatan ku sugan yahay Kooxda PSG
(Turin) 07 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa la soo warinayaa inay weli xiiso u qabto saxiixa Mauro Icardi.
Waxa uu amaah ku aaday naadiga reer France ee Paris Saint-Germain xilli ciyaareedkan, laakiin kooxda haysata horyaalka Serie A ee Juventus ayaa weli xiiseynaysa saxiixa xiddiga ay milkiyaddiisa leedahay Inter ee Mauro Icardi, sidaas waxaa warinaya Warsidaha Gazzetta dello Sport.
Waxaa loo maleynayaa inay Juve u arki karaan Icardi inuu yahay mustaqbalka fog ee Cristiano Ronaldo ka bedeli kara dhanka weerarka.
Federico Chiesa oo ka tirsan kooxda Fiorentina iyo Sandro Tonali oo mid ah naadiga Brescia ayaa sidoo kale loo maleynayaa inay yihiin bartilmaamedyo kale kaddib markii la la xariirinayay Juve suuqii xagaaga.
Kooxda Arsenal oo bisha Janaayo bartilmaameedsanaysa daafac ka ciyaara horyaalka Premier League
RASMI: Kooxda Inter Milan oo ka hadashay xaaladda dhaawac ee Stefano Sensi